Novotel Yangon Max - Your Co-Working Space
Novotel Yangon Max - Family & Business trip hotel - Your Co-Working Space
Home> SPECIAL OFFERS>Your Co-Working Space
Introducing Novotel Yangon Max Co-Working Space catering for the versatile. Your co-working space at GourmetBar, including coffee andapastry with high-speed wifi (max3hours usage) for only 10,000 MMK net per person.
The offer is valid between 9AM to 7PM until 31st of May 2021. No prior reservation is required.
အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ရတာ ငြီးငွေ့နေပြီလား? ဒါဆိုရင် နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ရှိ Gourmet ကော်ဖီဆိုင်မှာ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကို ကော်ဖီသောက်၊ ကိတ်မုန့်စားကာ အသုံးပြုရင်းလာရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ နေ့စဉ်မနက် ၉နာရီမှ ည၇နာရီအတွင်း ၃နာရီစာအသုံးပြုခကို တစ်ယောက် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် ကိတ်မုန့်တစ်မျိုးပါဝင်ပါသည်။ ကြိုတင်ဘိုကင်တင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ မေလ ၃၁ရက်နေ့အထိသာဖြစ်ပါတယ်။